ADY TOTOHONDRY : Nahazo fampitaovana avy amin’ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena ireo hiatrika ny lalaon’ny Nosy
Isan’ny taranja be mpanaraka eto Madagasikara ny ady totohondry. Taorian’ny fifanintsanana natao teto an-toerana dia misy ihany koa ireo ekipa hisolo tena an’i Madagasikara hiatrika ny lalaon’ny Nosy no sady hiaro ny voninahi-pirenena amin’ity taranja ity. 29 avril 2019
Ho fampirisihana ireo ekipa hiatrika izany dia nanolotra fitaovana maromaro ho azy ireo ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny jeneraly Richard Rakotonirina, izay sady Ray mpiahy manokana ny taranja ady totohondry eto Madagasikara. Arotanana (gants) miisa 20 sy aroloha (casque) miisa 20 no natolotony tamin’izany.
« Ady no hatrehina ka mila mitondra medaly volamena maromaro isika mody satria izany no fomba fiasa miaraka amin’ny mpandresy », hoy ny minisitra raha nanolotra ireto fitaovana ireto izy. Raha tsiahivina dia ity no andiany fahafolo andraisan’i Madagasikara anjara amin’ity ady totohondry ity ka i Maorisy no voafidy hampiantrano izany afaka volana vitsivitsy.